သင့်ရဲ့ရာထူး：နေအိမ်>သတင်း>စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသတင်းများ>တောင်ပြွန် heat exchanger အသေးစိတ်
အချိန်：24 August 2016 ကလစ်နှိပ်ပါ：58
တောင်ပြွန် heat exchanger ယန​​ေ့:
Finned ပြွန် heat exchanger ကျယ်ပြန့်အထူးသဖြင့်ရေနံဓာတု, သတ္တုဗေဒ, ပါဝါ, အထည်အလိပ်, ပုံနှိပ်ခြင်း, ဆေးဆိုး, ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်, အားလုံးစက်မှုနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည့်အပူလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခေတ်မီစက်မှုပစ္စည်းကိရိယာများဖြစ်ပါတယ်။ မှုကြောင့်အနိမ့်ကာဗွန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်စွမ်းအင်၏ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း, မကြာသေးမီနှစ်ထဲမှာ, finned ပြွန် heat exchanger စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့ဘယ်လို ပို. ပို. စက်မှုလုပ်ငန်းအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရ။ ယခုကတည်းကမြတ်သောဖျော်ဖြေပွဲရှိခြင်းသည်အခြားအပူပြောင်းလဲခြင်းအဘယ်သူအားမျှအစားထိုးနိုင်ပါတယ်၎င်း၏အကျိုးရှိစွာအပူလွှဲပြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်, လေထု (သို့မဟုတ်အခြားဓာတ်ငွေ့) အပူနှင့်အအေး, ။
Finned ပြွန်အလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာ heat exchanger ပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦး core ကိုဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏အရည်အသွေးကတိုက်ရိုက် heat exchanger ၏စွမ်းဆောင်မှုကိုထိခိုက်ခြင်း, chip ကိုပတ်ပတ်လည်အစဉ်အလာသစ်ကိုနည်းပညာကိုအပြောင်းအလဲနဲ့လူမီနီယမ်ပေါင်းစပ် finned ပြွန်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ဒါဟာဖိအားပေးမှုခုခံနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, အသေးစားယူနစ်အသံအတိုးအကျယ်, အပူလွှဲပြောင်းထိရောက်မှုနှင့်အတူလူမီနီယမ်ပစ္စည်းကိုသံမဏိအကျိုးရှိစွာအပူလွှဲပြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်, အသုံးပြုသည်။
Quanbang သင့်လိုအပ်ချက်ပြည့်မီဖို့တောင်ပြွန် heat exchanger ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဒီဇိုင်းအတွက်ကောင်းစွာတွေ့ကြုံဖြစ်ပါတယ်, ဒါ့အပြင်တောင်ပြွန် heat exchanger OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုအများဆုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထုတ်ကုန်စေရန်အလို့ငှာရရှိနိုင်ပါသည်။
တောင်ပြွန် heat exchanger ဖော်ပြချက်:
တောင်ပြွန် heat exchanger ရေနွေးငွေ့လေထုအပူပေးစက်နှင့်ရေ / အရည်လေထုအပူပေးစက်နှစ်ခုလုံးအတွက်သင့်လျော်သော, နှစ်ဦးစလုံးရေနွေးငွေ့နှင့်ရေပူစနစ်အဘို့ဖြစ်၏။ နာမတျောအအဖြစ် Finned ပြွန်, ထိုအလွှာပြွန်ပေါင်းတောင်ဆိုလို။ base ပြွန်ကာဗွန်သံမဏိပိုက်, သံမဏိ, ကြေးဝါပြွန်စေနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ, တောင်ပစ္စည်းများ၏အပြင်ဘက်ပတ်လည်မှာလည်းလူမီနီယမ်, ကြေးနီသို့မဟုတ်သံမဏိစာရွက်ရွေးဖို့အသုံးပြုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်လိုအပ်ချက်များကို၏အခွအေနနှင့်အညီစေနိုင်ပါတယ်။
တောင်ပြွန် heat exchanger applications များ:
အဓိကအားဖြင့်ပူပြင်းတဲ့လေထုအပူ, လေအေးစက်နဲ့အပူပေးစနစ်, လေထုခြောက်သွေ့ယန္တရား, ပူပြင်းတဲ့လေထုပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အဓိကစက်ပစ္စည်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိစက်မှုဇုန်နှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းများ, ကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦမှာ, ကျယ်ပြန့်အပူနှင့်လေဝင်လေထွက်စနစ်ထဲမှာလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ပြွန် heat exchanger features တွေ:
(2) ကို double သတ္တုပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှု, ခြေရင်းလူမီနီယမ်ပြွန်မြို့ရိုးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အလွှာပါဝင်သည်နေစဉ်, Anti-ချေး, အပူချိန်နှင့်တုန်ခါမှုအတွက်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပေါက်ကြားရန်မလွယ်ကူဘဲ, ကောင်းတစ်ဦးခုခံရှိသည်။
(4) တာဘိုင် condenser ချေးလျှော့ချ, ရေစူးစိုက်မှုနှုန်းကို recirculating ပြွန် heat exchanger တိုး finned ။
အပူ Exchange ပစ္စည်း: ကာဗွန်သံမဏိ, သံမဏိ, သို့မဟုတ်လူမီနီယမ်တောင် / ကာဗွန်သံမဏိပိုက်။
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အမျိုးမျိုးမော်ဒယ်များ, ထုတ်လုပ်မှု၏နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များအရသိရသည်။ OEM ကိုကြိုဆိုသည်။
ရည်ရွယ်ချက်: လေထုအပူသို့မဟုတ်အအေးအလတ်စားများအတွက်ပြည့်ရေနွေးငွေ့, ရေပူ, အပူရေနံသို့မဟုတ်ရေ, ရေခဲနှင့်ဆားရည်အိုင်အေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
prev：2019 ဖြင့်အပူ Exchange Market က Worth...